प्रकाशित मितिः मंसिर, २८, 2074
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । बाम तालमेल र गठबन्धनबाट डम्बर सुवेदी उर्फ हिमाल प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभाका क र खका लागि क्रमशः सर्वध्वज साँवा र रामप्रसाद मेहता चुनावी मैदानमा खडा रहेका छन् भने कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा सीताराम मेहता र प्रदेश सभामा क्रमशः हेमकर्ण पौडेल र राजीव कोइराला उम्मेद्वार बनेका छन् । डम्बर सुवेदी उर्फ हिमाल कलेज पढ्दा पढ्दै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बनेका हुन् ।
जन्म स्थान धनकुटा रहेका सुवेदी सुनसरीको भरौल हुँदै अहिले इटहरी उपमहानगर पालिका ३ नं. मा स्थायी बसोबास गर्छन् । २५ वर्से सक्रिय राजनीतिक अनेक उतार चढाव र अनुभव सह्मालेका डम्बरले मजदुर संगठनबाट सक्रिय राजनीति सुरु गरेका थिए । उनी यही क्षेत्र र फाँटको जिल्ला प्रमुख हुँदै केन्द्रीय नेतृत्व तहसम्म पुगेका हुन् । यसपछि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भई धनकुटा जिल्लाको प्रमुख रहेर सक्रिय र सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका सुवेदीले जनमुक्ति सेना कम्पनी कमिसार अनि ब्रिगेड कमिसार रहेर तत्कालीन पार्टी अभिभारा पूरा गरेका हुन् ।
यस पश्चात् सुनसरी जिल्ला इन्चार्ज रहेर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सुवेदी अहिले पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्य रहेका छन् । विगत संविधान सभा सदस्यका लागि यही सुनसरीको छ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेद्वार भएर प्रबल प्रत्यासीको अनुभव ग्रहण गरेका डम्बरसित शस्त्र र शास्त्र बलको अनुभव रहेको देखिन्छ । उनको बडिल्याङ्वेजले नै उनमा निहित कतिपय सकारात्मक विशेषता बताउँछ । डम्बर सुवेदी र सर्वध्वज साँवा दुवै कम्युनिष्ट वा बाम विचारका संवाहक हुन् । यही विचार,चिन्तन र चरित्रले यी दुवै पात्रलाई आन्दोलनमा जुटाएको र उठाएको हो ।
त्यसैले आम बाम तथा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु व्यक्तिलाई भन्दा विचारलाई सर्वोपरि ठान्छन्, विशेषता, क्षमता र विज्ञतालाई महत्व दिन्छन् । जन प्रतिनिधि छनौट गर्ने यथार्थ र वास्तविक कडी पनि यही हो । राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त सर्वध्वज साँवा ०३५ सालदेखि तत्कालीन माले पार्टीकालमा भूमिगत भई राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन् । सुनसरी जिल्ला पार्टीको सदस्य सचिवालय सदस्य हुँदै अहिले प्रदेश नं.१ पर्टी सदस्यको जिम्मारीमा रहेका साँवा इटहरीका इमान्दार, मिलनसार तथा विकासपे्रमी प्रथम मेयरको समृद्ध अनुभव सम्हालेका व्यक्तित्व हुन् ।
बाम तालमेलका कारण साँवा प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुन पुगेका हुन् । त्यसैगरी विशेष परिस्थितिमा बाम तालमेलका क्रममा नेता र कार्यकर्ताको विशेष व्यवस्थापन गर्दा डम्बर सुवेदी सुनसरी २ नं. क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुन पुगेका हुन् । डम्बर सुवेदी हुन् वा सर्वध्वज साँवा हुन् दुवै शालीन,सौम्य र शान्त मुखमुद्रा जन्य प्रस्तुतिबाट पनि तिनका विशेषताहरु थाहा हुन्छ । उता सीताराम मेहता निरन्तर प्रतिनिधि समा सदस्यमा विजयी उम्मेद्वार हुन् । उनको पकेटमतलाई अर्का कांग्रेसका पुराना तर एमाले पार्टीमा सगौरव प्रवेश गरेका कुशल नेता रामप्रसाद मेहताले आफ्ना पक्षमा पारिरहेका छन् ।
उनका कारण त्यस क्षेत्रका कांग्रेस अगुवा कार्यकर्ताहरु एमाले प्रवेशको लहर नै सुरु भएको एमाले नेता खेमराज पोखरेल बताउँछन् । रामप्रसाद मेहतासहित डम्वर सुवेदीको चुनावी प्रचारको लहर निक्कै उत्साहजनक रहेको युवा नेता वसन्त सुवेदीले बताए । यता साँवाको निष्कङ्क,इमान्दार पारदर्शी राजनीतिक चरित्र र चिन्तनले हेमकर्ण पौडेललाई धेरै भारी हुन थालेको माओवादी केन्द्रीय सदस्य सागर सुवेदीले उल्लेख गरे । हुन पनि कुनै पनि पार्टीको नेता र कार्यकर्ता कुनै पनि खतबात नलागेकै हुनुपर्छ अझ जनप्रतिनिधिका रुपमा उम्मेद्वारी हुने र दिने कुरामा अझ होस गर्नुपर्छ । जुवाको खालबाट पक्राउ पर्नु, सार्वजनिक मुद्दा वापत सजाय पाउनु, नेल हतकडीसहित सार्वजनिक हुनु मुद्दा लाग्नु जस्ता अनेक गैरराजनीतिक गतिविधिलाई पनि राजनीतिसित जोड्ने गरिन्छ । यस खालको गतिविधिले कुनै पनि पार्टीमा जन आकर्षण बढ्दैन ।
साँवा हरहिसाबले क्लीन रहेका छन् । उनी मेयर भएकै समयमा इटहरीले कायापलट गरेको यही लेखकको पनि प्रत्यक्ष अनुभव रहेको छ । आफ्नो कार्यकालमा इटहरीको बहुआयामिक विकासको बलियो जग बसाएको हुनाले सर्वध्वज साँवाको व्यक्तित्व राष्ट्रव्यापी बन्न पुगेको हो । कामले नै काम सिकाउँछ । विकास निर्माण र जनताको हित साधन गर्ने सबालमा समृद्ध अनुभव हासिल गरेका सर्वध्वज साँवालाई विजयी गराउनु इटहरीको नाक राख्नु हो । साँवा र सुवेदीको विजयले मात्र आम नगरवासी तथा क्षेत्र नं. २ का जनताको शान,मान र इज्जत मात्रै बढ्ने होइन आर्थिक समृद्धिमा पनि गहकिलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । यो पङ्तिकार त लेखक हो कमजोरी देख्ने बित्तिकै अहिले तारिफ गरेका पात्रहरुको पनि कमजोरीलाई छाँस्ने छ । एउटासम्म कलुषित दाग नलागेका साँवा र सुवेदी नै यस नगर र क्षेत्रका आशलाग्दा र भरपर्दा जनप्रतिनिधि हुनसक्छन् ।
यही चुनावी अभियान र परिणामलाई यस लेखकले अत्यन्त दूरदर्शी र दूरगामी ठानेको छ । अहिले देशको सुरक्षा,स्थिरता,समृद्धि र समुत्थानलाई शीर्षस्थ स्थानमा राख्ने अवस्था हो । यो बाम तालमेल र भावी दिनमा हुने एकता एक जुगमा एकचोटि मुस्किलले आएको अत्यन्त मूल्यवान् घडी हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका तमाम नेता,कार्यकर्ता र समर्थकले यस तालमेलको दूरगामी र दूरदर्शी उद्देश्यलाई अवश्यै मनन गर्ने छन् । विगत दश बर्से कालका माओवादी केन्द्रका कतिपय गतिविधिका कारण एमालेका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक वा मतदाताहरु हैरान हुनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
मानौँ घरको एउटा सदस्य घर झगडा गरेर, घरमा सानोतिनो विध्वंश गरेर ठूलो पौरख गर्छु भनेर घर छाडेर गयो तर समय क्रममा अनेक हण्डर,ठक्कर र भुक्तमान खपेर र खाएर अब म सप्रिन र सच्चिन चाहन्छु भनेर घरका अभिभावकसित नम्र निवेदन सहित घर फर्कियो भने त्यसलाई घरबाट लघार्न सकिन्न, परिवारको त्यो सदस्यलाई परिवारले नै त्यसलाई निषेध गर्नै सक्तैन । राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा उदाहरण पारिवारिक घर पनि हुनसक्छ । बाम तालमेल र एकताबाट नेपाली कांग्रेस धेरै नै अताल्लिएको देखिन्छ ।
यस कुराबाट भारतीय सरकार र सत्ता झन् धेरै आत्तिएको पाइन्छ । दलाल पुँजिवादी र तिनका रक्षक पार्टीलाई जिताई सरकार बनाइएर नेपाललाई उद्योग र व्यापारका नाममा लुट्न चाहनेहरुको ओठमुख सुकेकोे अवस्था छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले इटहरी उपमहामनगर पालिकामा भएको सिएफएल घोटाला काण्डलाई अतिरञ्जित गर्न थालेको देखिन्छ । इटहरी उपमहानगर पालिका वार्ड नं.९ का निर्वाचित वडा सदस्य तथा नगरपालिका द्वारा निर्मित सिएलएफ घोटाला छानबीन समितिका सदस्य गणेश खत्रीले जसले भ्रष्टाचार गरे पनि सजाय दिलाउने बताए ।
खत्रीले एमाले वा बाम गठबन्धनले चरम भ्रष्टाचार गरेर जेल जीवन भुक्तान गरेर थुनामुक्त भएका खुम बहादुर जस्ता नेतालाई सय किलोको फूलमाला पहि¥याएर तुल व्यानर सहित हर्क बढाइँ गरिँदैन भन्दै कांग्रेस पार्टी प्रति कटाक्ष गरे । स्वयं हेमकर्ण पौडेलले इटहरी उपमहानगर पालिकामा भएको नागरिक समाजका पदाधिकारी र सदस्य सहितको एक बैठकमा मेयर द्वारिकलाल चौधरीको आर्थिक इमान्दाररिताका विषयमा हाँसपोसा गाउँ पालिका हुँदा देखि नै परिचित रहेको बताएका थिए ।
नगरपालिकाको चेकमा मेयरको सही चल्दैन,नगर पालिका बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ र तदनुसार नगरपालिकाको नियम कानूनका अधीनमा रहेर अधिकृतले सारा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । नगर पालिकाको अधिकृत भनेको तमाम विकास,निर्माण,खरीद बिक्री जस्ता विषयको विज्ञ हो र हुन्छ । उसैले मातहत कर्मचारी पनि परिचालन गर्छ । तर इटहरी उपमहानगरको अधिकृत किन दुई महिना भित्रै यहाँबाट सरुवा भएर गए । कम्तीमा दुई वर्ष कार्यकाल भएका अधिकृत सिएफएल काण्ड रातारात सम्पन्न गरेर किन सरुवा भए ? तिनले सिएफएल खरिदको भुक्तान गरिहाल्ने हतारो किन गरे ? मेयर द्वारिकलाल चौधरीले नगरका एकाध कर्मचारीलाई हात लिएर अधिकृतले गरेको काम अत्यन्त संदिग्ध रहेको बताए, चौधरीले १५,१५ दिनमा मेयरलाई रिपोटिङ गर्ने काम पनि गरेनन् । अधिकृतले नगरका यतिका महत्वपूर्ण कामका बारेमा मेयरलाई कुनै जनकारी नै नदिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
अहिले त बाम तालमेलबाट बहुमतको सरकार बनाउने गरी अझ दुई तिहाइ समेत ल्याएर स्थायी र स्थिर सरकार बनाउने माहौल बनिरहेको बेला हो । नेपालमा स्थिरता र विकास चाहने चीन नेपालमा आर्थिक भौतिक सहयोग ओइ¥याउन चाहन्छ र चीन यसो भयो भने खुसी हुन्छ । तर भारतीय शाषक सदासर्वदा नेपाल अस्थिर र अविकसित भएकोमा आफ्नो स्वार्थ देख्छ । भलै प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा नेपाली काङ्ग्रेसहरुका बीच प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो तथापि संयुक्त बाम दल एक ढिक्का भएको यो अवस्थामा बाम उम्मेद्वारहरुले प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेद्वारहरुलाई करारी हार गराउने पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । यस विषयमा सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष समेत भइसककेका एमाले पूर्व सभासद् रेवती भण्डारीले दुई नम्बर प्रदेशमा मत अन्तर केही घटीबढी भए पनि बाम तालमेलका सबै उम्मेद्वार विजयी हुने बताए ।